Saameyn intee la eg ayay warbaahinta ku yeelan kartaa amarka lagu soo rogay Wasiirada ? | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Saameyn intee la eg ayay warbaahinta ku yeelan kartaa amarka lagu soo...
Saameyn intee la eg ayay warbaahinta ku yeelan kartaa amarka lagu soo rogay Wasiirada ?
Kadib markii Warqad uu ku saxiixan yahay Ra’iisal Wasaare ku xigeenka dalka laga soo saaray Xafiiskiisa, taasi oo Wasiirada Xukuumadda ka mamnuuceysa in Warbaahinta ay ka hadlaan iyaga oo aanan fasax uga haysan Ra’iisal Wasaaraha dalka, ayaa amarkaasi dadka Odorosa Siyaasada dalka waxa ay ku micneeyeen dhawr sababood.
Arinta ugu wayn ee keentay in amarkaan uu soo baxa ayaa aheyd, kadib markiii Saddex Wasiir oo ka tirsan Xukuumadda siyaabo kala duwan uga hadleen dad shacab ah oo lagu laayay degaanka Bariire ee Gobolka Shabellaha hoose.
Wasiirka Warfaafinta oo ahaa Wasiirkii ugu horeeyay ee ka hadlay dhacdadaasi ayaa ku tilmaamay in la dilay xubno Shabaab ka tirsan, Wasiirka arrimaha Dibada Yuusuf Garaad oo qoraal soo dhigay Boggiisa Xiriirka Buylshada ayaa dhankiisa ku sheegay wixii ka dhacay Bariire inay ahaayeen laba hawlgal oo mid ka mid ah lagu dilay Shabaab isaga oo soo xiganaayay qoraal ka soo baxay Wasaarada Warfaafinta Somaliya.
Wasiirka Gaashaandhiga oo ugu dambeyn hadlay ayaa dadkii la laayay ku tilmaamay rag hubaysan oo diiday inay hubka dhigaan, balse Dowladda ay baareyso inay Shabaab ahaayeen iyo in maleeshiyo beeleed ahaayeen.
Hadaladaasi iska soo horjeeda oo Saddex Wasiir oo ka tirsan Xukuumadda ka soo baxay ayaa dhaliyay xasaasiyad ku aadan falka dhacay, waxayna ugu dambeyn sababtay amarka soo baxay ee wasiirada looga mamnuucay inay ka hadlaan Warbaahinta.
Dhinac marka laga eego amarkaasi wuxuu saameyn ku yeelanayaa Warbaahinta oo waxaa adkaaneyso helida isku dheelitirnaanta Wararka ee Warbaahinta sida uu tusaaleynaayo Ustaad Siciid Xagaa Afrax oo ah Khabiir dhanka Warbaahinta.
Axmed Guutaale Agaasimaha Idaacada Mustaqbal ayaa qaba aragtida ah amarkaan inuusan saameyn badan ku yeelan Karin Warbaahinta.
Dowladda Somaliya inay Bulshada siiso macluumaad ku sabsan dhaq dhaqaaqa Dowladda waa masuuliyada saaran dadka xilka haayo, inkastoo ay haboonan laheyd in Afhayeen rasmi ah Xukuumadda ay yeelato oo ka hadlo wararka Xukuumadda ku saabsan sida uu qabo Axmed Ciise Guutaale Agaasimaha Radio Mustaqbal.
Isbar bar yaaca dhanka Warbaahinta iyo shaqsi kasta oo Dowladda ka tirsan oo faafiya Xogta Dowladda ayaa keenta xilliyada qaar dhibaatooyin dhasha oo ku aadan in dhawr siyaabood ay ku kala macmeeyaan hal dhacdo oo taagan xubno Dowladda ka tirsan oo ku hadlaya Afka hal Dowlad, balse bixinaya xogo aanan isla hayn.